Fanoherana ny herisetra an-tokantrano, nidina an-dalambe sy nampiasa ireo tambajotra sosialy ny vehivavy azerbaijana · Global Voices teny Malagasy
Lasa adihevitry ny firenena ny tantaranà herisetra an-tokantranon'ny tovovavy iray
Voadika ny 27 Novambra 2019 14:24 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Ελληνικά, Italiano, Español, Português, English
Ireo vehivavy manohitra ny fanararaotana an-tokantrano ao afovoan'ny tanànan'i Bakò, Azerbaijana. Sary avy amin'i Najaf Ruslanoglu, nahazoana alàlana.
Tamin’ny 19 septambra, nanao Facebook i Seljan Yagmur, 18 taona, ka nilaza tamin'izao tontolo izao ny herisetra an-tokantrano ataon’ny rainy. Nalainy baraka tao amin’ilay lahatsoratra nosoratany ny rainy noho ny fitondrantenany nanoloana azy, ny rahavaviny ary ny renin-dry zareo. Betsaka ny nahamarika io lahatsoratra io : mpanohitra mafana fo sady filoha lefitry ny antoko Front Populaire-n’i Azerbaijana i Fuad Gahramanli, rain’i Seljan. Ny antsasak'ireo nametraka fanehoankevitra tamin'ny lahatsoratr'i Seljan tao amin'ny Facebook dia nino fa nanao izay tokony ho nataony izy, ny sasany kosa dia nihevitra azy ho marary saina noho ny nilazany ny toetran-drainy.
Nihevitra ireo mpikambana ao amin'ny antoko politika misy ny rainy fa voasoketa i Gahramanli.
Izany dia noho ny fandalàn'i Azerbaijana ny nentim-paharazana, heverina ho tena tsiambaratelo ny herisetra an-tokatrano – tsy tokony hivoaka ny tokantrano mihitsy izany, na inona na inona fidonany. Maro ireo fitsaràna an-tendro no novakian'i Seljan tamin'ny alàlan'ilay lahatsorany : tovovavy iray nanohitra ny rainy, niresaka momba ireo niteny ny reniny mba hangina ary nanala baraka ny filohan’ny antoko misy ny rainy noho ny tsy nanasiana resaka imasom-bahoaka momba ilay raharaha. Tamin’ity tranga ity, tsy vitan'ny hoe nanaitra momba olana fotsiny ilay nidonany fa lasa niteraka adihevitra nanerana ny firenena ilay resaka.
Tao anatin'ny trangam-pandresena tsy fahita firy, dia nametra-pialana amin’ny maha-filoha lefitry ny antoko azy i Gahramanli – na dia mbola tsy nifona ampahibemaso noho ny fitondrantenany nanoloana ny ankohonany aza. Fa nihoatra noho izany no vitan’ilay lahatsoratra : nampirongatra resabe momba ny herisetra atao amin’ny vehivavy any Azerbaijana sy ny fomba fahitana izany izy (lahatsoratra).
Iray volana mahery taorian’ny namoahan’i Seljan ilay lahatsoratra, tranganà herisetra an-tokatrano maro no nanomboka natao lohateny lehibe tany Azerbaijana. Tao anatin’ny dimy andro monja tamin’ny fiandohan’ny volana Oktobra dia nitatitra tranganà fanararaotana an-tokatrano 12 samihafa ny ihatra amin’ny vehivavy ny haino aman-jery azerbaijane, lazaina fa samy tatitry ny mpitandro filaminana izy ireo. Vehivavy efatra no maty tamin’ireny tranga ireny. Ankoatra izay, notaterin'ny mpanome vaovao iray tsy miankina Mikroskop fa teo anelanelan’ny Janoary sy Septambra 2019 fotsiny, dia efa 118 ireo tranganà herisetra sy fanararaotana atao amin’ny vehivavy notaterin’ny haino aman-jery azerbaijane ; maty vokatry ny ratra be nahazo azy ny 33 tamin’ireo niharam-boina ireo raha toa ka nampidirina hopitaly noho ny ratra nahazo azy ny ambiny. Tsatok’antsy no tena fototry ny ratra.
Raha te-hahalala bebe kokoa vakio : Ny fomba nanapariahan'ny mpanao gazety iray ny hetsika #MeToo tany Armenia (teny anglisy)
Amin’izao fotoana izao, avoakan'ireo Azerbaijane amin’ny aterineto sy ny haino aman-jery ny momba ny herisetra an-tokatrano. Zarin’ireo vehivavy ao amin’ny tenifototra hoe : #qadınaşiddətəson (atsaharo ny herisetra atao amin’ny vehivavy) sy ny hoe #Leylaüçünsusma (aza mangina noho ny amin’i Leila », manondro tranga iray vao haingana tany Bakò, vehivavy iray voatsatoka antsy maherin’ny in-droa ambin’ny folo.) Nidina an-dalambe ihany koa ry zareo. Ny 20 Oktobra, nisy vondrona fiarahamonim-pirenena mafana fo nikarakara hetsika fanehoan-kerin’ny vahoaka tany Bakò, renivohitr’i Azerbaijana ” Aza leferina izany ! Mirosoa ! ” (#DözməYürüşEt) no teny faneva tamin'izany. Izao no fitantaran'ilay vondrona momba izany :
Tato ho ato, tsy tambo ho isaina ny herisetra an-tokatrano sy famonoana vehivavy tsikaritra tany Azerbaijana . Novakiantsika ny tantaranà vehivavy iray izay nokapohana, novonoina ary noteren’ireo fianakaviany hamono tena, na hitsahana amin’ny fiarakodia. Izany no antony hanaovantsika diabe miala avy eo amin’ny sary vongan’i Khurshudbanu Natavan [ilay poeta azerbaijane sady zanaka vavin’i Khan avy any Karabakh] […] mba hanandratra ny feontsika hanohitra io habibiana io, mba hiteny hoe tsia amin’ny herisetra atao amin’ny vehivavy ary hisintona ny sain’ny fiarahamonina sy ny fanjakana hijery ireo olana ireo. Amin’ny fiafaran’ny diabe dia hanao fanambarana mikasika io olana io isika. Misokatra amin’izay rehetra tsy mihafahafa ny diabe. Iray amin’ireo teny filamatra lehiben’ny diabe ny hoe : ” Aza mangina amin’ny herisetra, aza milefitra amin’ny herisetra !
Tsy vao ity no diabem-pivoarana fanoherana voalohany miady ho an'ny zon'ny vehivavy tato amin'ny firenena tamin'ity taona ity. Tamin'ny 8 martsa, Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny hetsika voalohany ary nanaitra ny saina hijery ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ny fampanambadiana ireo zaza tsy ampy taona ary ny fanalànjaza miankina amin'ny maha-lahy na maha-vavy ilay zaza any Azerbaijana.
Saingy ny 20 oktobra, rehefa nidina an-dalàmbe ireo andiam-behivavy sy lehilahy vitsivitsy ka nitaky ny fampitsaharana ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia nifanehatra tamin'ny herisetran'ny mpitandro filaminana ry zareo. Azo jerena ato amin'ity tatitra lahatsary avy amin'ny BBC any Azerbaijana ity ny sasany amin'ireo zava-niseho :
Mbola misy foana ny fanesoana mampalahelo atao amin'ireo mpanao fihetsiketsehana :
Mianatra manidina any amin'ny làlana Torgovaya [toerana nisehoan'ny fisamborana] aho eto
Nangataka ihany koa ny hanaovan'i Azerbaijana sonia ny Fifanarahana tany Istanbul mandrara sy miady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny herisetra an-tokatrano ireo mpandray anjara tamin'ilay hetsipanoherana. Tsy mbola nosoniavin'i Azerbaijana ilay fifanarahana izay miantso ny governemanta hiaro ny vehivavy amin'ny karazana herisetra rehetra, hiady amin'ny herisetra an-tokantrano ary manaiky ny hampiroborobo ny fitoviana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Manery azy ireo ihany koa izany mba hamolavola drafitra sy politika hanampiana ireo niharam-boina tamin'ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy ary hiditra anaty fifanarahana iraisam-pirenena hanatrarana io tanjona io.
Fa nanova zavatra ilay hetsi-panoherana. Iray andro tato aoriana, angamba noho ny fanakianana mafy avy amin'ny vahoaka tamin'ny fihetsika mahery vaika nataon'ny mpitandro filaminana, dia nanambara ny Vaomiera misahana ny fianakaviana, ny vehivavy ary ny ankizy ao amin'ny governemanta fa nanolotra volavolan-kevitra momba ny Fifanarahan'i Istambola any amin'ny Parlemanta ry zareo. Na izany aza, tsy nolazain'ilay vaomiera mazava tsara ny hoe oviana ry zareo no nanao ilay tolokevitra, sy ny hoe inona marina no ao anatiny. Manazava ihany koa ilay Vaomiera fa na tsy nanaiky ilay Fifanarahan'i Istambola aza ry zareo dia miasa mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fiarovana ny zon'ny vehivavy miaraka amiin'ireo andrim-panjakana hafa.
Fa ampy ve izany ? Tsara ho tadidiana fa na ny lalàna mikasika ny herisetra an-tokatrano any Azerbaijana, izay nolaniana tamin'ny 2010 aza, dia mandidy ny governemanta hamatsy vola sy hamorona fialofana ho an'ireo niharam-boina, fa mbola tsy tanteraka izany. Raha ny marina, ireo vondrona tsy miankina no nanorina sy mitantana ireo trano miasa ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka itoeran'ireo vehivavy. Nolazain'ny mpitondra tenin'ilay kaomitin'ny governemata tamin'ny Mikrosoft fa ny tsy fahampian'ny vola no antony lehibe mahatonga ny tsy fahampian'ireo trano fialofana vatsian'ny fanjakana.
Farany, raha toa ka dingana mankamin'ny làla-mahitsy ny fanaovana sonia ilay fifanarahan'i Istambola dia tsy ho ampy hampitsaharana ny herisetra an-tokatrano izany. Tsy maintsy miova ihany koa ireo fenitra ara-tsosialy efa latsa-paka sy ireo fitsaràna an-tendro ara-pananahana. ” Vokatry ny rafitra tsy fitoviana ara-pananahana eto amin'ny firenena sy manerantany io herisetra atao amin'ny tovovavy sy ny vehivavy io ” hoy i Michelle Milford Morse filoha lefitry ny Tetikady ho an'ny Tovovavy sy ny Vehivavy, ao amin'ny Firenena Mikambana tao anaty antsafa iray vao haingana. Miorim-paka amin'ny fanavakavahana, tsy fitovian-kery ary ny fenitra ara-tsosialy nampidi-doza izany. Ary izany no mbola hitohizany mandrak'androany.”
Tsy maningana amin'izany i Azerbaijana. Tendronà vongan-dranomandry fotsiny ireo tarehimarika manelingelina taterin'ny Mikroskop ireo. Toa betsaka, tena betsaka ireo heloka bevava atao amin'ny vehivavy no mbola tsy fantatsika — Any Azerbaijana, matetika ny vehivavy dia amporisihana hangina ary tsy hilazalaza mihitsy ny tranganà herisetra an-tokatrano. Araka ny voalazan'ny tatitra tetsy aloha, dia fara-fahakeliny 800 isantaona no isan'ireo karazana trangana herisetra ” heloka bevava sy fandikàndalàna “, nefa ahian'izy ireo fa na io isa io aza dia tsy azo itarafana ny tena zava-nisy marina, na ampahafiriny amin'ireo no trangana herisetra an-tokatrano.
Fa na izany aza, antony iray mahatonga ny famoretana mahery vaika ataon'ny mpitandro filaminana ao amin'ny firenena iray, izay olana goavana ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ny fidinana an-dàlambe mba hanaitra ny saina hijery ilay olana. Angamba mety mahavaly ny fanontaniana hoe :” inona no antony tsy andehanan'ireo niharam-boina ireo voalohany any amin'ny mpitandro filaminana.